ခငျြပနျဇီတှေ တကယျပဲ ဆေးလိပျသောကျတတျသလား ? – SoShwe
Home/Other/Animals/ခငျြပနျဇီတှေ တကယျပဲ ဆေးလိပျသောကျတတျသလား ?
တရုတျနိုငျငံ အရှပေို့ငျးရှိ Hefei Wildlife Park အတှငျးမှ ခငျြပနျဇီတဈကောငျ ဆေးလိပျသောကျနသေညျ့ ဗီဒီယိုတဈခု ထှကျပျေါလာပွီးနောကျ အဆိုပါဗီဒီယိုနဲ့ ပတျသကျပွီး ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါ၌ ဝဖေနျမှုအမြားအပွား ထှကျပျေါလာခဲ့ပါတယျ။ အှနျလိုငျးပျေါသို့ ဗီဒီယိုတကျလာပွီးပွီးခငျြး (၂၄) နာရီအတှငျး၌ပငျ ကွညျ့ရှုသူ သနျးနဲ့ခြီ ရှိခဲ့ပွီး အဆိုပါဆေးလိပျကို ကမ်ဘာ့လှညျ့ခရီးသှားတဈယောကျက ခငျြပနျဇီရဲ့ လှောငျအိမျအတှငျးသို့ ပဈထညျ့သှားခွငျးဖွဈကွောငျး တိရိစ်ဆာနျရုံဘကျမှ ဖွရှေငျးခဲ့ပါတယျ။
(၁၁) စက်ကနျ့သာကွာမွငျ့သညျ့ အဆိုပါဗီဒီယို၌ ခငျြပနျဇီသညျ ဆေးလိပျကို ဟနျပါပါနဲ့ထိုငျသောကျနခေဲ့ပွီး တိရိစ်ဆာနျရုံဝနျထမျးတဈဦးကမူ “အဲ့ဒီနရောမှာ ဆေးလိပျတဈလိပျပဲရှိတာပါ။ ဘာမှဆိုးဆိုးရှားရှားမရှိပါဘူး။ လူတှကေ ဆေးလိပျသောကျလာတာ နှဈပေါငျးမြားစှာကွာနပွေီး ဒီဖွဈရပျက နတေို့ငျးဖွဈနတောမြိုးလညျးမဟုတျပါဘူး။ ကမ်ဘာလှညျ့ခရီးသှားတဈယောကျက ဆေးလိပျကို လှငျ့ပဈသှားပွီး ခငျြပနျဇီကလညျး ဆေးလိပျကို ဟနျပါပါကောကျသောကျတော့တာပဲ။” ဟု ဖွရှေငျးပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
အဆိုပါတိရိစ်ဆာနျရုံရဲ့ ဝငျကွေးသညျ (၃.၈) ပေါငျခနျ့သာ ကုနျကပြွီး နညျးပါးလှသညျ့ဝငျကွေးကလညျး ယခုကဲ့သို့ ဖွဈရပျမြားကို ဖွဈပှါးစသေညျဟု ဝဖေနျမှုမြားရှိနပေါတယျ။ ဝဖေနျမှုမြားနဲ့ပတျသကျ၍ အဆိုပါဝနျထမျးက “ဒီမှာက နစေ့ဉျ ဧညျ့သညျပေါငျး သောငျးနဲ့ခြီလာရောကျနပွေီး ဝနျထမျးက (၁၀၀) ပဲရှိတာပါ။ အဲ့ဒီအတှကျ ဧညျ့သညျတိုငျးကို လိုကျပွီးစောငျ့ကွညျ့နဖေို့ဆိုတာ မဖွဈနိုငျပါဘူး။ ဝငျကွေးကလညျး လူတိုငျးတတျနိုငျအောငျ လုပျပေးထားတာဖွဈပွီး တခွားနရောတှလေို (၂၂) ပေါငျကနေ (၃၃) ပေါငျအထိ ကောကျခံဖို့ဆိုတာ မဖွဈနိုငျပါဘူး။” ဟု ပွောကွားခဲ့ပါသေးတယျ။
၂၀၂၀ ခုနှဈ ဇူလိုငျလကလညျး အဆိုပါ တိရိစ်ဆာနျရုံရှိ ခငျြပနျဇီတဈကောငျသညျ လှောငျအိမျအတှငျးမှ လှတျထှကျသှားခဲ့ပွီး ဧညျ့သညျတဈဦးကို တိုကျခိုကျခဲ့ဖူးပါသေးတယျ။ အမညျမဖျောလိုသညျ့ အမြိုးသမီးတဈဦးရဲ့ ပွောကွားခကျြအရ ယခုဆေးလိပျသောကျနသေညျ့ ခငျြပနျဇီသညျ ထိုစဉျက ဧညျ့သညျကို တိုကျခိုကျခဲ့သညျ့ ခငျြပနျဇီမဟုတျဘဲ အခွားခငျြပနျဇီတဈကောငျဖွဈပွီး ခငျြပနျဇီနှဈကောငျလုံး ကနျြးကနျြးမာမာနဲ့ ရှိနကွေောငျးလညျး သိရှိရပါတယျ။
ချင်ပန်ဇီတွေ တကယ်ပဲ ဆေးလိပ်သောက်တတ်သလား ?
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းရှိ Hefei Wildlife Park အတွင်းမှ ချင်ပန်ဇီတစ်ကောင် ဆေးလိပ်သောက်နေသည့် ဗီဒီယိုတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် အဆိုပါဗီဒီယိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်၌ ဝေဖန်မှုအများအပြား ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်သို့ ဗီဒီယိုတက်လာပြီးပြီးချင်း (၂၄) နာရီအတွင်း၌ပင် ကြည့်ရှုသူ သန်းနဲ့ချီ ရှိခဲ့ပြီး အဆိုပါဆေးလိပ်ကို ကမ္ဘာ့လှည့်ခရီးသွားတစ်ယောက်က ချင်ပန်ဇီရဲ့ လှောင်အိမ်အတွင်းသို့ ပစ်ထည့်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း တိရိစ္ဆာန်ရုံဘက်မှ ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။
(၁၁) စက္ကန့်သာကြာမြင့်သည့် အဆိုပါဗီဒီယို၌ ချင်ပန်ဇီသည် ဆေးလိပ်ကို ဟန်ပါပါနဲ့ထိုင်သောက်နေခဲ့ပြီး တိရိစ္ဆာန်ရုံဝန်ထမ်းတစ်ဦးကမူ “အဲ့ဒီနေရာမှာ ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ပဲရှိတာပါ။ ဘာမှဆိုးဆိုးရွားရွားမရှိပါဘူး။ လူတွေက ဆေးလိပ်သောက်လာတာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေပြီး ဒီဖြစ်ရပ်က နေ့တိုင်းဖြစ်နေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတစ်ယောက်က ဆေးလိပ်ကို လွှင့်ပစ်သွားပြီး ချင်ပန်ဇီကလည်း ဆေးလိပ်ကို ဟန်ပါပါကောက်သောက်တော့တာပဲ။” ဟု ဖြေရှင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်ရုံရဲ့ ဝင်ကြေးသည် (၃.၈) ပေါင်ခန့်သာ ကုန်ကျပြီး နည်းပါးလှသည့်ဝင်ကြေးကလည်း ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်ရပ်များကို ဖြစ်ပွါးစေသည်ဟု ဝေဖန်မှုများရှိနေပါတယ်။ ဝေဖန်မှုများနဲ့ပတ်သက်၍ အဆိုပါဝန်ထမ်းက “ဒီမှာက နေ့စဉ် ဧည့်သည်ပေါင်း သောင်းနဲ့ချီလာရောက်နေပြီး ဝန်ထမ်းက (၁၀၀) ပဲရှိတာပါ။ အဲ့ဒီအတွက် ဧည့်သည်တိုင်းကို လိုက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဝင်ကြေးကလည်း လူတိုင်းတတ်နိုင်အောင် လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး တခြားနေရာတွေလို (၂၂) ပေါင်ကနေ (၃၃) ပေါင်အထိ ကောက်ခံဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လကလည်း အဆိုပါ တိရိစ္ဆာန်ရုံရှိ ချင်ပန်ဇီတစ်ကောင်သည် လှောင်အိမ်အတွင်းမှ လွတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီး ဧည့်သည်တစ်ဦးကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။ အမည်မဖော်လိုသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ ပြောကြားချက်အရ ယခုဆေးလိပ်သောက်နေသည့် ချင်ပန်ဇီသည် ထိုစဉ်က ဧည့်သည်ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် ချင်ပန်ဇီမဟုတ်ဘဲ အခြားချင်ပန်ဇီတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီး ချင်ပန်ဇီနှစ်ကောင်လုံး ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ရှိနေကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။
Previous Seth Rogen ရဲ့ ခြီးမှမျးခနျးဖှငျ့ခဲ့တဲ့ Snoop Dogg
Next ရကေူးကနျထဲကမိကြောငျးကို ခကျခဲစှာကယျဆယျခဲ့ရတဲ့ ဖလျောရီဒါနိုငျငံသား။